ဂီတဗီဒီယို ရိုက်ကူးနေစဉ်မှာ စတန့်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး သေနတ်ထိမှန်သေဆုံး | Buzzy
ဂီတဗီဒီယို ရိုက်ကူးနေစဉ်မှာ စတန့်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦး သေနတ်ထိမှန်သေဆုံး
သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာ ဂီတဗီဒီယိုတစ်ခု ရိုက်ကူးနေရင်း အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် စတန့်မင်းသား Johann Ofner ဟာ ဘားဆိုင်တစ်ခုထဲမှာ သေနတ်ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က အတည်ပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
သွစတွေးလနြိုငျငံမှာ ဂီတဗီဒီယိုတဈခု ရိုကျကူးနရေငျး အသကျ ၂၈ နှဈအရှယျ စတနျ့မငျးသား Johann Ofner ဟာ ဘားဆိုငျတဈခုထဲမှာ သနေတျထိမှနျသဆေုံးခဲ့ကွောငျး ရဲတပျဖှဲ့က အတညျပွု ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဖြစ်စဉ်ကတော့ သီချင်းကို ပုံဖော်ရိုက်ကူးနေစဉ်မှာပဲ သေနတ်အချို.က မတော်တဆ ကျည်ထွက်ပြီး မင်းသားရဲ. ဝမ်းဗိုက်ကို ထိမှန်သေဆုံးခဲ့ရတာလို့ သိရပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကတော့ ဘယ်တေးဂီတအဖွဲ့ရဲ. သီချင်းကို ရိုက်ကူးတယ်ဆိုတာ ထုတ်မပြောထားပေမယ့် သတင်းတွေအရတော့ ဟစ်ဟော့ပ်အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Bliss N Eso အဖွဲ့ရဲ. တေးသီချင်းကို ရိုက်ကူးစဉ်ဖြစ်ပွားတာလို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Bliss N Eso အဖွဲ့ကလည်း မင်းသားသေဆုံးကြောင်း အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဖွဈစဉျကတော့ သီခငျြးကို ပုံဖျောရိုကျကူးနစေဉျမှာပဲ သနေတျအခြို.က မတျောတဆ ကညျြထှကျပွီး မငျးသားရဲ. ဝမျးဗိုကျကို ထိမှနျသဆေုံးခဲ့ရတာလို့ သိရပါတယျ။ ရဲတပျဖှဲ့ကတော့ ဘယျတေးဂီတအဖှဲ့ရဲ. သီခငျြးကို ရိုကျကူးတယျဆိုတာ ထုတျမပွောထားပမေယျ့ သတငျးတှအေရတော့ ဟဈဟော့ပျအဖှဲ့တဈခု ဖွဈတဲ့ Bliss N Eso အဖှဲ့ရဲ. တေးသီခငျြးကို ရိုကျကူးစဉျဖွဈပှားတာလို့ သိရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Bliss N Eso အဖှဲ့ကလညျး မငျးသားသဆေုံးကွောငျး အတညျပွုပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပေမယ့်လည်း အခင်းဖြစ်ပွားစဉ်မှာ Bliss N Eso အဖွဲ့သားတွေဟာ ရိုက်ကွင်းမှာ ရှိမနေပါဘူး ။ ဒါကြောင့် ရိုက်ကူးရေးအဖွဲပတွေနဲ့အတူ ဖြစ်စဉ်ကို အမြန်ဆုံး အဖြေမှန်ရဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ရိုက်ကွင်းမှာ သေနတ်အစစ် ကျည်ဆံအစစ်ကို အသုံးပြုခဲ့တာဟာ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေသလို ဘယ်နှစ်ချက်ပစ်ခဲ့သလည်း ဆိုတာကိုလည်း စုံစမ်းဆဲပဲ ရှိပါသေးတယ်။
ဒါပမေယျ့လညျး အခငျးဖွဈပှားစဉျမှာ Bliss N Eso အဖှဲ့သားတှဟော ရိုကျကှငျးမှာ ရှိမနပေါဘူး ။ ဒါကွောငျ့ ရိုကျကူးရေးအဖှဲပတှနေဲ့အတူ ဖွဈစဉျကို အမွနျဆုံး အဖွမှေနျရဖို့ ရဲတပျဖှဲ့နဲ့ ပူးပေါငျးလုပျဆောငျနတေယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။ ရိုကျကှငျးမှာ သနေတျအစဈ ကညျြဆံအစဈကို အသုံးပွုခဲ့တာဟာ မေးခှနျးထုတျစရာ ဖွဈနသေလို ဘယျနှဈခကျြပဈခဲ့သလညျး ဆိုတာကိုလညျး စုံစမျးဆဲပဲ ရှိပါသေးတယျ။